Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/amboa
Proverb 27 Adin' amboa : izay mahery no ombana . [Veyrières 1913 #608, Abinal 1888]
Proverb 42 Afa-baraka lahy, fa voakaikitry ny amboa kely tiana . [Veyrières 1913 #5428]
Proverb 87 Akanga be tsy vakin' amboa . [Veyrières 1913]
Proverb 290 Amboa ananam-be tsy ananan-daza , tsy ananana mahafa-baraka . [Veyrières 1913 #2341]
Proverb 291 Amboabe miandry varavarana : tsy vitan-dranom-bary , fa notsipazan-taolana . [Veyrières 1913 #699, Cousins 1871 #132]
Proverb 292 Amboadia mitafy hodi- janak' ondry : ny tenany no takona , fa ny toetrany tsy miova. [Rinara 1974 #160]
Proverb 293 Amboa fola-tanana : fangalàna ny zanany. [Samson 1965 #A53]
Proverb 294 Amboa homana ondry , ka ny aina no manefa . [Veyrières 1913 #4268]
Proverb 295 Amboa kely mitsaba- -dronono . [Veyrières 1913 #4266]
Proverb 296 Amboakelin-dRazakabezafy : omen-dranom-bary , tsy mety , ka ny volombodin-trano no lelafina . [Cousins 1871 #133]
Proverb 297 Amboa kely tery vozona . [Veyrières 1913 #746]
Proverb 299 Amboalahy koro, ka manala voninahitra ny tompony . [Veyrières 1913 #747, Cousins 1871 #135]
Proverb 300 Amboalahy manitrika ka samy te-ho derain' ny tompony . [Rinara 1974 #165]
Proverb 302 Amboalahy mikiky taolana : tsy hery, fa hihitra . [Cousins 1871 #136]
Proverb 303 Amboalahy mitsaba-doharano : tsy hetaheta fa hasomparana . [Rinara 1974 #167, Cousins 1871 #137]
Proverb 304 Amboa lahy mivakan-troditra : mañiry hanina an-tenda . [Houlder 1895]
Proverb 305 Amboalahy nivakan’ angozo : maniry hanina an-tenda . [Samson 1965 #A56]
Proverb 306 Amboalahy tsy many. [Samson 1965 #A55]
Proverb 307 Amboalambo . [Veyrières 1913 #6717]
Proverb 308 Amboalambo folaka . [Veyrières 1913 #6410]
Proverb 309 Amboalambo tsy ampoka : homana ny sisan’ ny mpiasa . [Cousins 1871 #139]
Proverb 310 Amboa mahia , ka miverina ilalana . [Veyrières 1913 #2275]
Proverb 311 Amboa maka valala : ny kibo ihany no fenoina . [Veyrières 1913 #6202, Cousins 1871]
Proverb 312 Amboa merom-bava : tsy velo-mandà . [Samson 1965 #A45]
Proverb 313 Amboa miantsena: maty antoka, tsy mba mameno ; mahazo tombony, tsy mba mizara . [Houlder 1895 #1203, Cousins 1871 #125, Rinara 1974]
Proverb 314 Amboa mitomany valala: tova volana, fa lehibe no miteny . [Rinara 1974 #171, Cousins 1871 #131, Veyrières 1913]
Proverb 315 Amboa momba mangaiña, sady tsy mahalany firaña no tsy mitahy miasa. [Houlder 1895]
Proverb 316 Amboa nangala- katsaka : ampangain’ ny tainy. [Samson 1965 #A46]
Proverb 317 Amboan-dRatsikonkona : sady tsy mody tsy tamàna. [Samson 1965 #A47]
Proverb 318 Amboa ngerom-bava , ka raha mandalo toa hitondra sokina ihany. [Veyrières 1913 #4269]
Proverb 319 Amboa nihaza jorery ka feo no re . [Rinara 1974 #20]
Proverb 320 Amboa nihaza mamba , ka mandimby ananana . [Houlder 1895 #1720, Cousins 1871 #128]
Proverb 321 Amboa nihorok’ aomby : tsy fitiavana fa fangaronana ny atiny. [Samson 1965 #A54]
Proverb 322 Amboa nitapahin-drambona : tsaran’ ny mpanintina . [Samson 1965 #A51]
Proverb 323 Amboa nitsaka : mamindra halemana amin’ olona . [Samson 1965 #A50]
Proverb 324 Amboa nivahiny : tonga tsy mahafaly, lasa tsy mampalahelo . [Houlder 1895 #1483]
Proverb 325 Amboa nivahiny : tonga tsy naharavo , niainga tsy nahataitra . [Samson 1965 #A44]
Proverb 326 Amboa nivalavalan- taolana : sady taitra ravo. [Samson 1965 #A52]
Proverb 327 Amboa sanga : tsy manana aminahy . [Samson 1965 #A48]
Proverb 329 Amboa tsy manara-tompo . [Veyrières 1913 #750]
Proverb 330 Amboa tsy nifora : nahateka tany. [Samson 1965 #A43]
Proverb 331 Amboa vahiny . [Veyrières 1913 #6718]
Proverb 554 Ankadivory masiaka amboa : mandany zara ny tompony . [Rinara 1974 #270, Cousins 1871 #239]
Proverb 585 Anti-poana hoatry ny amboan' Avaradrano . [Veyrières 1913 #1801]
Proverb 809 Aza atao fihavanan' alika , ka taolana iray no isarahana . [Rinara 1974 #383]
Proverb 956 Aza manao amboa ditsika . [Veyrières 1913 #6344, Houlder 1895]
Proverb 1061 Aza manao karazan' amboa : zato lahy tsy midina an-kosy , arivo vavy tsy mitam-body ketsa . [Veyrières 1913 #3900, Rinara 1974 #530, Cousins 1871 #472]
Proverb 1236 Aza mandaka amboa mandry . [Houlder 1895 #831]
Proverb 1246 Aza mandeha tsy voizina , toy ny lakana mivalan-drano . [Houlder 1895 #1205]
Proverb 1271 Aza manendry tena ohatra ny alika ho any an-tsena. [Houlder 1895]
Proverb 1293 Aza manitsaka amboa mandry . [Veyrières 1913 #6275]
Proverb 1409 Aza mipelipelika ohatra ny amboakely len-drano . [Houlder 1895]
Proverb 1472 Aza mitsararaka ho akanga hianao, fa manana amboa mahay ala aho. [Cousins 1871 #674]
Proverb 1530 Aza te-hoderain' ny alika , ka mikiky taolana tsy misy hena. [Houlder 1895 #840]
Proverb 1907 Fadin-dambo amin' amboa . [Veyrières 1913 #3075]
Proverb 1922 Fakana amboan-tSakalava : tanana amy ny vavany ihany vao mety mihinana . [Cousins 1871]
Proverb 2049 Fatakana volon-dambo ; tenina volon’ amboa : tsy ny atao , vita , tsy ny alàna, afaka fa Zanahary mandidy . [Samson 1965 #F20]
Proverb 2133 Fitiavako trandraka tsy hibabiako amboa . [Houlder 1895]
Malagasy interpretation Fitiavako trandraka tsy hibabeko alika . [Houlder 1895]
Proverb 2348 Hena lasan' amboa : ny hena lasany leoko ihany, fa ny fidingin' ny rambony no tsy tanty . [Rinara 1974 #1305]
Proverb 2379 Hianao kibobo mahay manjohy , izaho amboa mahay mihaza. [Rinara 1974 #1321, Cousins 1871 #1060]
Proverb 2484 Hotetehiko hoatry ny bala ka homeko ny amboa . [Veyrières 1913 #4193]
Proverb 2774 Joko an-danonana fa mavitrika amim-paty toa amboa . [Rinara 1974 #1569]
Proverb 2829 Kaodikaody ohatra ny amboam-bahiny : izay mandalo rehetra toa hikapoka daholo. [Cousins 1871]
Proverb 3086 Lanjan’ amboa : atahorana ny vavany hanaikitra , atahorana ny vodiny handoto . [Samson 1965 #L29]
Proverb 3115 Lava hadalana hoatry ny valalan' amboa : kely mitsipika , lehibe mandady . [Veyrières 1913 #2082]
Proverb 3150 Lehibe tsy havanambanana ohatra ny amboan' Avaradrano . [Rinara 1974]
Proverb 3265 Mahamonamonaina , ohatra ny tantely vidin' amboa . [Cousins 1871]
Proverb 3310 Mahita amboa miady taolana ka mahatsiaro ny hena fony nandro. [Cousins 1871 #1423, Rinara 1974, Rajemisa 1985]
Proverb 3438 Mamono amboa : izay namono, manary. [Samson 1965 #M76]
Proverb 3791 Maniry hanina an-tenda , hoatry ny amboa miambozon-koditra . [Veyrières 1913 #5859]
Proverb 3884 Maro ny sangy fa ny tain' amboa tsy hifampitorahana . [Rinara 1974 #2144]
Proverb 3967 Maty tsy alevin-kavana , tahaka ny amboa . [Rinara 1974 #2208]
Proverb 4040 Miala maina toy ny avy nandevina alika . [Rinara 1974 #2245]
Proverb 4067 Mianjona karaha amboa naondrana . [Samson 1965 #M106]
Proverb 4093 Mibalitalita hoatry ny amboa kely voky ron-kena . [Veyrières 1913 #4695]
Proverb 4195 Mihomehy amboa mahia ka ibohazan' ny volony. [Rinara 1974 #2326]
Proverb 4400 Mitoha tsy manana ohatra ny amboa , be fady andro toa kisoa . [Rinara 1974]
Proverb 4431 Mitondra izay fitondran-tena tsy ampy ka vovozin' ny amboa tompon-tany. [Veyrières 1913 #3042, Rinara 1974 #2475, Cousins 1871]
Proverb 4502 Miverin-dalana ohatra ny amboa mahia . [Rinara 1974]
Proverb 4585 Mpamosavy novovozin' ny alika : ho azy ihany no farany . [Rinara 1974 #2568]
Proverb 4678 Na amboako na amboan' olona , izay vandana dia kary . [Houlder 1895 #1070, Veyrières 1913 #4309]
Proverb 4900 Ny amboa aza atao hoe, an' ny malala . [Houlder 1895 #230]
Proverb 4901 Ny amboa no be aina , fa raha voky ran-kena , mandry ilalana . [Houlder 1895 #824, Veyrières 1913]
Proverb 4985 Ny avona rambon' amboa , ka samy mijonjona amin' ny azy. [Rinara 1974 #2911]
Proverb 5109 Ny fitia tsy fanao mody voky , na mody iavonana toa varin' amboa mahamay . [Rinara 1974 #3003]
Proverb 5212 Ny kary tsy tia ; ny amboa maivivy . [Houlder 1895 #2211, Cousins 1871 #2278]
Proverb 5396 Ny nenina tsy ondry roahina fa amboa manjohy lalana . [Rinara 1974]
Proverb 5439 Ny ondry voatsipy taolana , ary ny amboa voatsipy vilona : tao ihany fa nifanolana . [Houlder 1895 #1688]
Proverb 5474 Ny ratsy toy ny amboa : raha esesena , dia avy. [Cousins 1871 #2405]
Proverb 5516 Ny sodokan' ny amboa tsy ho vola , hitaiza zana-kisoa mba hiavotana . [Rinara 1974 #3250]
Proverb 5612 Ny torovok' amboa maro mpahalala , fa ny hisafelehan' ny rambony no tsy misy mahafantatra . [Rajemisa 1985]
Proverb 5729 Ny volon-tany samy hafa: fa raha any aminay izany, dia vovon' alika , fa atý aminareo angaha no olona . [Houlder 1895]
Proverb 5759 Nokekerin' amboa tany Imamo , ka any Ambatomanga mbola mikapoka alika ihany. [Veyrières 1913 #6404, Cousins 1871]
Proverb 5760 Nokekerin' ny amboa kely tiana . [Rajemisa 1985 #61]
Proverb 5770 Odian-tsy tiana ohatra ny varin' amboa mahamay . [Rinara 1974]
Proverb 5880 Ondry : manao katro-doha , amboa : mifanaikitra , saka : mifandrangotra , samy ady fa tsy mitovy . [Rinara 1974]
Proverb 6005 Raha amboa no miady , aoka hanao, fa tsy salaka ho tapaka , tsy lamba ho rovitra. [Cousins 1871]
Proverb 6439 Sakalava manaiky tsy mba famono ; amboa mitsilany tsy hanin' ny namany . [Cousins 1871 #2831, Nicol 1935 #20]
Proverb 6447 Saka manana ny hohony , amboa manana ny vanginy. [Rinara 1974 #3812]
Proverb 6472 Salasala toy ny mitery ombin-drafozana : mirerarera toa tsy hahazo , hisikina toa hamono zanak' omby . [Rinara 1974]
Proverb 6753 Tain’ amboa , ka ny avo ihany no tovonana . [Veyrières 1913 #2245, Rinara 1974 #3991, Cousins 1871]
Proverb 6754 Tain’ amboa mitongoa mandotra : ratsy ambonin’ ny ratsy . [Samson 1965 #T9]
Proverb 6849 Tany Imano re no nokekerin' alika fony fahavaratra , ka ambaraka ny efa aty Ilavatehezana avy ankehitriny no malonilony manenjika amboa mba hivaliana faty . [Veyrières 1913 #6384]
Proverb 6867 Tanontanonim-poana , toy ny varin’ amboa maha-may. [Veyrières 1913 #3976, Rinara 1974 #4050, Cousins 1871 #3015]
Proverb 6979 Te-hoderain’ ny amboa , ka mikiky taolan- tsy misy. [Cousins 1871 #3062]
Proverb 7026 Tezitra vao mivanika , toy ny alika . [Veyrières 1913 #5633, Cousins 1871 #3087]
Proverb 7106 Toy ny amboa : anana-mahavoafady , tsy anana-mahavoafady . [Houlder 1895 #1487]
Proverb 7107 Toy ny amboa : ananam-be , tsy malaza ; tsy ananana , maha-voafady . [Veyrières 1913 #2252, Cousins 1871 #3177]
Proverb 7109 Toy ny amboa mainty vava , ka ataony ho nangala- pihinana ihany. [Houlder 1895 #1071, Cousins 1871]
Proverb 7300 Torovok’ amboa maro mahalala, ny safeliky ny ohiny tsy maro mahay. [Samson 1965 #T103]
Proverb 7327 Tovolahy tsy mahalala ho an-tena, sakafon' ny alika gaigy . [Houlder 1895 #1921, Rinara 1974 #4234]
Proverb 7370 Tritran' amboa . [Veyrières 1913 #6788]
Proverb 7399 Tsara ny miezaka fa iaraha-manana amin' ny amboa . [Rinara 1974 #4408]
Proverb 7424 Tsy amboa tsy lambo . [Veyrières 1913 #2565]
Proverb 7541 Tsy mahavaly vava amboa . [Veyrières 1913]
Proverb 7553 Tsy manana amboa akory. [Veyrières 1913 #2567]
Proverb 7559 Tsy manan-karon-kasiana , hoatry ny alika . [Veyrières 1913 #2414]
Proverb 7639 Tsy mety raha hitarika amboa mihazo ity, fa nony mitondra hena nivily lalana . [Rinara 1974]
Proverb 7650 Tsy mety raha mamporisika ny amboa ho firain' ny lambo . [Veyrières 1913 #3373, Rinara 1974 #4605, Cousins 1871 #3427]
Proverb 7674 Tsy mety raha miala maina ohatra ny nandevim-boka . [Rinara 1974]
Proverb 7678 Tsy mety raha mihazakazaka tsy hihaino teny , hoatry ny alika . [Veyrières 1913 #1735]
Proverb 7691 Tsy mety raha ratsy amboa mpanaraka . [Veyrières 1913 #6531]
Proverb 7849 Tsinjak' amboa . [Veyrières 1913 #6793]
Proverb 7988 Valalan' amboa : ny tompony aza tsy tia , ka mainka izay olon-kafa . [Veyrières 1913 #2258]
Proverb 8152 Velona amboa . [Veyrières 1913 #176]
Proverb 8371 Vovòn' alika tsy hery fa tahotra . [Cousins 1871, Houlder 1895, Nicol 1935, Rajemisa 1985]